Rwendo rweguta uye kuona nzvimbo neChitsuwa cheKutengesa Basel -
Kwete chete bhizinesi revatengesi - uye mhuri uye mapoka kusvika kuvanhu vane 7 - tinopa mukana wekufamba zvakanaka mune imwe ye classic uye elegant limousines pamusoro.
Kunyanya mumwedzi yemazhizha, Basel inokwezva vazhinji vezvivakisi vanoda kutsvaga maguta akapoteredza kuSwitzerland, France neGermany. Nokuda kwenzvimbo yedu yakanakisisa tinogona kuita kuti guta rako rive rakanaka sezvinobvira. Vakawanda vebhizimisi revatengi vedu vanonakidzwa nemukana wekubatanidza bhizinesi nevanenge vari voga uye kutungamirirwa nevatori vechikoro vedu vane ruzivo kubva kune dambudziko rebhizimisi nekuongorora zvevanhu, kwete kungoona, asi mazano mashomanana pamwe chete kuratidza.
Service Limousine yekutenderera kune rimwe guta muguta reEurope
Mutyairi wedu anokutungamirira kwete kwete chete, asiwo nguva, nekuchenjera uye nekuchengetedza kuenda kwako. Kubva kuBasel, nzvimbo dzakasiyana-siyana munzira inoenda kuguta raunosarudza ndiyo inonyatsoongorora.
Tsvaga Zurich kubva kumimousine
Ivha Iwe unogona kunyatsokwanisa kupedza imwe awa motya kubva kuBasel kusvika kuZurich mune imwe yeGermany limousines. Mukuwedzera kune migwagwa yepakati pekare mune yekare yeguta reRoma, nzvimbo yakagadziriswa yakawanda muEuropeallee uye yakawanda yakasanganiswa yemitambo yenhoroondo muSwitzerland yakamirira iwe pano muimba yechinyorwa ye Landesmuseum Zurich. Pakupedzisira asi zvisingaiti, nyika yakakurumbira yeChagall yakasvibisa girazi muFrauenmünster muZurich haisiyekanganwiki kune mumwe mushanyi.
Iwe unoda kuunganidza guta rako rekuenda Zurich neine ruzivo rwakawanda rwekutenga? Chinhu chakanaka! Zurich inozivikanwa nevashanyi vanobva kumativi ose epasi pose kune mabhopu ayo chete, mabhizimusi anokosha uye mabhizinesi evanokurumbira. Pakati pevamwe Kristua deCarouge, Fabric Frontline, Hannes B. naKönix vari pamba pano uye vanouya nehupenzi hwekufuka, zvepurasitiki uye shangu. I Swiss Casino muZurich inoshamisika pedyo nezviitiko zvinonakidza nemitambo yakasiyana-siyana uye nhangwende. Uye kune vakuvhoti vakuru nevaduku, Zurich inokukoka kune yakakurumbira yeFIFA World Football Museum.
Guta kuenda kuM Mulhouse Ville mu limousine
The Mulhouse French - inenge hafu yehora yekutya kubva kuBasel - inosangana neBasel neFebiburg yeEuropean International Airport. Vazhinji vevatengesi vemabhizimisi edu vanowanzoshandisa kushandiswa kwebasa redu kubva kuBasel Airport kuenda kunzvimbo yebhizimisi ye Mulhouse City muAlsace. Guta iri munharaunda ine miganhu rakakunda zvikuru mu 18. Mazana emakore seapiyona weFrench mafashandisirwo emagetsi nemafuta ayo emagetsi anokosha zvikuru. Nevashandi vanopfuura 10.000, Peugeot ndiye anoshanda zvikuru muAlsace. Mulhouse Ville inoshamiswa nemhando dzakasiyana-siyana dzekushandiswa pakati pezvakaitika kare mune zvigadzirwa zvemabhizimisi uye machechi emakore ekumazana nemirairo yevatongi, iyo Fabric Printing Museum uye yakakurumbira National Museum Cité de l'Automobile.
Kuwedzera kumaguta eSwitzerland, Germany neFrance, isu zvirokwazvo tinotungamirirawo mutyairi kune mamwe maguta. Iwe uchawana runyorwa rwekuenda kunoshandiswa pane webhusaiti yedu, apo iwe uchawanawo mari yekutengesa kwandege yedu. Tinotarisira kune yako Online Réservation kana kudana kwako ku + 41 78 861 35 50.
Akaiswa mu: Airport shuttle muBasel nhandare yendege Shuttle Limousine basa guta hwatsvuka
taxi.flughafen April 6, 2017 April 6, 2017 Uncategorized Hapana mhinduro
← BASA RINO 2018 - Kufamba uchitenderera neTransfer Service Basel